अब मधुमेह चिन्ता किन ? यी १० सरल घरेलु विधी अपनाउनुहोस् « Farakkon
अब मधुमेह चिन्ता किन ? यी १० सरल घरेलु विधी अपनाउनुहोस्
प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ७ गते बुधवार
कुनैबेला यस्तो थियो, पाको व्यक्तिलाई मधुमेह हुने । अहिले वयस्क होइन, युवादेखि बालबालिकामा समेत मधुमेहको समस्या छ । किनभने मधुमेह कुनै उमेरसँग सम्बन्धित रोग होइन । बरु, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित समस्या हो । खराब जीवनशैली र खानपानले तपाईं, हामी मात्र होइन, हाम्रो बालबच्चा पनि यसको चपेटामा पर्न थालेका छन् ।
अहिले मधुमेह रोगीको संख्या तिव्र रुपमा बृद्धि भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
मधुमेह रोग विश्वभरको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यसको जोखिमबाट बाच्ने सरल काइदा हो, स्वस्थ्य, सक्रिय, सन्तुलित र संयमित जीवनयापन । यसभित्र हाम्रो दिनचर्यादेखि खानपानसम्म पर्छ ।
यी त भए मधुमेह लाग्नै नदिने काइदा । तर, मधुमेहले च्यापिसकेको अवस्थामा के गर्ने ? मधुमेह नियन्त्रणका लागि औषधी उपलब्ध छ । अन्य उपचार विधी पनि छन् । तर, घरेलु एवं प्राकृतिक विधी सर्वोत्तम हुनसक्छ, जसले दीगो रुपमा हामीलाई यसबाट छुटकारा दिलाउँछ ।
यी १० घरेलु उपाय अपनाएर मधुमेहको बिरामीले राहत पाउन सक्छन्ः
मधुमेहका बिरामीलाई अत्याधिक प्यास लाग्ने गर्छ । त्यसैले बारम्बार प्यास लागेको अवस्थामा कागती निचोरेर पिउनाले प्यासको अधिकता शान्त हुन्छ ।
मधुमेहका बिरामीहरुलाई भोकाएको बेलामा थोरै थोरै र हल्का भोजन लिने सल्लाह दिइन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई बारम्बार भोक लाग्छ । यो स्थितीमा काँक्रो खाएर भोक मेटाउँदा यसले फाइदा गर्छ ।
३. गाँजर पालुङ्गो
मधुमेहको रोगीहरुले गाँजर र पालुङ्गोको रस मिलाएर पिउनुपर्छ । यसले आँखाको कमजोरी समेत टाढा हुन्छ ।
मधुमेहको रोगीले लौका, परवल, मेवा आदीको सेवन गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ । शलगमको सेवनले रगतमा चिनीको मात्रा कम हुन थाल्छ । त्यसैले सलगमको सब्जी, परौठा, सलाद आदी परिकार बनाएर स्वाद परिवर्तन गर्दै लिन सक्नुहुन्छ ।
मधुमेहको उपचारमा जामुन एक पारम्परिक औषधी हो । जामुनलाई मधुमेहका रोगीको फल भन्दा अतिशयोक्ति हुँदै किनभने यसको दाना, बोक्रा, रस र गुदी सबै मधुमेहको बिरामीको लागि फाइदाकारी हुन्छ । मौसम अनुरुप जामुको सेवन औषधिको रुपमा गर्नुपर्छ ।
६. जामुनको दाना
जामुनको दाना संगालेर एकत्रित गर्नुहोस् । यसको बिजमा जाम्बोलिन नामक तत्व पाइन्छ जसले स्टार्चलाई चिनीमा बदल्नबाट रोक्छ । जामुनको दानाको चूर्ण बनाएर राख्नुहोस् । दिनमा दुई तीन पटक तीन ग्रामको मात्रामा पानीको साथमा सेवन गर्नाले पिसाबमा सुगरको मात्रा कम हुन्छ ।
प्राचिन कालदेखि नै करेलालाई मधुमेको औषधिको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यसको कडा रसले रगतको मात्रा कम गर्छ ।
मधुमेहको रोगीले यसको रस दैनिक पिउनुपर्छ । यसले आश्चर्यजनक लाभ मिल्छ । हालसालै भएको एक नयाँ शोधका अनुसार उमालेको करेलाको पानीले मधुमेहलाई छिट्टै स्थायी रुपमा समाप्त गर्ने क्षमता राख्छ ।
मधुमेहको उपचारको लागि मेथीदानको प्रयोगको पनि धेरै चर्चा छ । औषधि कम्पनीहरु मेथीको पाउडरलाई बजारसम्म ल्याएका छन् । यसले पुरानो मधुमेह पनि ठिक हुन्छ ।
मेथीदानाको चूर्ण बनाएर राख्नुहोस् । दैनिक बिहानबिहान खाली पेटमा दुई चियाचम्चा चूर्ण पानीको साथमा खानुहोस् । केही दिनमा नै तपाईं यसको अद्भुत क्षमता देखेर चकित हुनुहुन्छ ।
९. गहुँको जमरा
गहँुको विरुवामा रोगनाशक गुण हुन्छ । गहुँको सानासाना अंकुरको रसले घातकरोगहरुलाई पनि निको बनाउँछ । यसको रस मानिसको रगतसँग चालिसप्रतिशत मेल खान्छ ।
यसलाई हरियो रगतको नामले पनि चिनिन्छ । जमराको ताजा रस निकालेर आधा कप तुरुन्त पिउनुहोस् । दैनिक बिहान बेलुका आधा कपको मात्रामा यसको सेवन गर्नुहोस् ।
१०. अन्य उपचार
नियमित रुपले दुई चम्चा निमको रस, पत्तागोभीको रसको चारचम्चा दैनिक बिहान बेलुका लिनुहोस । त्यस्तै अमलाको रस चारचम्चा, गुडमारको पत्ताको काडा बिहान बेलुका लिन पनि मधुमेह नियन्त्रणको लागि रामवाण उपचार हो । अनलाइन खबर बाट साभार